Raysul Wasaare Cabdiweli oo ka khdubeeyey debadbax ka dhan ah Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raysul Wasaare Cabdiweli oo ka khdubeeyey debadbax ka dhan ah Alshabaab
23rd February 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Raysul wasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa maanta oo Axad ah ka qeyb-galay dibadbax lagu taageerayay nabadda, loogana soo hor-jeeday falalka weerarada ah ee Al-Shabaab ay qaadeyso qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka.
Dibadbaxa oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo ururrada haweenka ee gobolka Banaadir ayaa lagu muujinayay in weerarrada ay geysaneyso Al-Shabaab aanay wax ka beddeleyn go’aanka dadka Soomaalida ay ku doonayaan nabadda iyo horumarka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska raysul wasaaraha.
“Waxaad muujiseen geesinimo iyo sida aad diyaar ugu tihiin inaad iska difaacdaan argagaxisada bahalka ah ee doonaya inay damiyaan iftiinka nabadda,” ayuu yiri raysul wasaare Cabdiweli Sheekh oo ka hadlayay dibadbaxa.
“Kooxdan lunsan waxa ay dadka Soomaaliyeed ee Muslimiinta ah ku beegsanayaan masaajidda. Xukuumaddu waa idin garab istaagaysaa xilligan aynu ku jirno halganka aynu dib ugu xaqiijinayno dowladnimadeena” sidaasi ayuu Ra’iisul Wasaare Cabdiwali.
Cabdiweli Sheekh ayaa ugu baaqay haweenka Soomaaliyeed inay horseed ka noqdaan is-beddelka iyo halganka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Haweenka Soomaaliyeed ay weligood ahaayeen horseed, isagoo xusay inay doonayaan in ay maantana horseed ka noqotaan is-bedelka iyo halgankan, banaan-baxan waxa uu astaan iyo bilow u yahay is-bedelka caasimadda iyo dalka.
Wasiirka haweenka iyo xuuqda aadanaha Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa ku baaqday in hal meel looga soo wada jeesto kooxaha nabad-diidka ah.
“Haweenka Soomaaliyeed wax cabsi ah kama qabaan dhimashada, nafta ayay u hurayaan dalkooda si loo helo nabad buuxda, loona soo celiyo karaamadii ummmadda Soomaaliyeed,” ayay tiri Khadiija.
“Dadweynaha Muqdisho oo kaashanaya Dowladooda waxay maanta diyaar u yihiin inay kahor tagaan kooxaha kahorjeeda jiritaankooda” ayay sidoo kale tiri Wasiirada Haweenka iyo horumarinta Qoyska.
Dadweynaha ka qeybgalay debadbaxa ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo kala duwan oo ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana dibad-baxan uu ku soo beegmay, xilli maalmihii u dambeeyay Al-Shabaab muqdisho ka geysaneysa weeraro kala duwan oo ugu weynaa weerarkii jimcihii lagu qaaday Xarunta Madaxtooyada
Midowga Dalladaha Waxbarashada Soomaaliya oo qaadacay mideynta Imtixaanka
Madaxweynaha Kenya oo raba xoojinta dagaalka ka dhanka ah Alshabaab